Muran ka taagan cirib goyntii dhacdey dagaalkii labaad ee aduunka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tiinaarahaii Auschwitz ee lagu gubi jirey meedka intii ay socotey cirib goyntii dagaalkii labaad ee dunida. Foto: Ingrid Engstedt Edfast/SR
Muran ka taagan cirib goyntii dhacdey dagaalkii labaad ee aduunka
Muran ka taagab ereyga cirib goyn(holocoust)
La daabacay fredag 14 februari 2014 kl 16.01
Inta uu socdey dagaalkii labaad ee aduunka waxaa la sheegaa in naziiztihii Jarmalka gumaadey lix milyan oo ruux oo kamid ah qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee Yurub. Laakiin marka ay heyadda dowliga ah ee u qaabilsan taariikhada Forum för levande Historia ka hadleyso cirib goyn qoomiyadeed waxaa loo aqoonsan yahay keli in loo geystey qoomiyada yahuuda ah.
Halka ay sidoo kale nadziga Jarmalka gumaadeen boqolal kun oo ka tirsan qoomiyada laga tirada badan yahay ee Romerka. Eheladii dadkii Romerka ahaa ee Nadsiistahii Jamalka gumaadey ayaa aad u dhaleeceysan turjimaada qaloocan ee laga bixiyo gumaadkii nadziga Jamalka ee dagaalkii labaad ee aduunka. Dadka arintaas dhaleeceysan waxaa kamdi ah Diana Nyman oo ah ruux halgamaa ah oo katirsan qoomiyada romerka Iswiidhen.
- Hadda qeexidooda waxa weeye in dadka romerka loogeystey xasuuq dadweyne laakiin kalmada ah cirib goyn qoomiyadeed waxaa monobool ku heystey yaduuda.
Waxey aheyd bishii januari sannadkan markii la qabtey dabaal deg lagu weyneynayey xasuusta maalinta loo yaqaano holocoust ama baabi’inta. Dhamaan qalabyadii xasuusta aheyd ee ay soo bandhigtey heyadda Forum för levande historia ee ay ku qornaayeen baanbi’in ayaa ka hadlayey aya lagu xusey keliya qoomiyada yahuuda, taas oo ay Diana Nyman ka gelgilatey. Marka laga hadlayo romerka iyo qomiyadaha kala waxaa la isticmaalaa erayo leh micnoyaal kale oo mararka qaarkood ah kuwo gurracan. Bandhiga xasuusta xasuuqii nadziga sannad waxaa loogu talo galay in lagu weyneeyo dhibaatadii soo gaartey qoomiyada romerka. Diana Nyman waxey dooneysa in dhamaan dhibanayaasha nadziga loo isticmaalo erayo leh micnayaal iskumid ah.
- Waa in ay ku qornaataa in qoomiyada romerka loo geystey baabi’in. Maanta waxaa la yiraahdaa keliya romerka dhibaato aayaa ka soo gaartey baabi’inta nadziiztayaahsi jarmalka, taas oo leh micno nooc kale ah. Bogaada waxaa ku qoran in ereyga ah cirib goyn u dhowrsan yahay keliya dadka yahuuda. Marka laga hadalyo romerkana waxaa laga hadlaa xasuuq dadweyne keliya, ayey tiri
Dadka inta badan waxaa laga yaaba in doodan aysan micno badan u laheyn, waayo waxa laga doodayo waa hal erey iyo sida loo isticmaalayo. Laakiin dadka romerka oo boqolaal sanno la soo dhibaateynayey isla markaana loo geystey gumaad nidaamsan xilligii Nadsihii Jarmalka, ayaan doodan micno weyn ugu fadhidaa. Oo aanan dooneynin in mar labaad arimahooda dayacmaan.
Dhaleeceynta dadka romerka ay arintan u hayaan ayaa waxaa qirsan in ay sax tahay Eskil Frank oo ah masuul sare oo ka tirsan heyadda Forum för levande Historia. Kaas isku dayey in wax ka badalo qeexida arintan. Ereykan loo yaqaan holocousta qaabka loo qeexayo waxaa logu dajiyey baaqii Stockholm oo soo baxey sannadkii 2000. Kaas oo ah dokumenti ka soo baxey shirweyne caalamiya oo lagu qabtey Stockholm oo looga hadley arimaha cirib goynta ama holoustiga.
Aqoonta la xiriirta Holcous-ka ayaa kordhey waqtiyadan dambe kadib cilbaarista badan oo arimahan lagu sameeyey. Halka waagii hore marka laga
hadlayo cirib-goynta dadka maskaxdooda ay ku soo dhaci jirtey keliya dadka yahuuda balse maanta aqoon fiican ayaa arimahan loo leeyahey ayuu yeri Eskil Frank
- Anniga waxaan arkaa horumar laga sameeyey arintan. Waxan qabaa in maanta kalmadaan cirib goynta loo arko in ay tahay oraahda ka tarjumeysa dhacdooyin dalad soo wada gala.
Eskil Frank iyo dadka ay la shaqeeyaan ayaa waxey la xiriiren dowladda si loo balaariyo fahamka oraahda cirib goynta laakiin weli illa hada laguma guuleysan in dowladda arintaan laga dhaadhicyo, sida uu yeri Eskil Frank. Radio Romano oo ah qayb kamid ah Radiyahan Iswiidhen oo ku baxa afka-qoomiyada romerka ayaa xataa la xiriirey wasaarada dhaqanka oo u xaqiijsey in aysan jirin qorsho wax looga badalayo oraahdan iyo dokumentiga qeexaya ee bayaanka Stockholm.
Sidaa daraad ayey heyadda Forum för levande Historia ku qasbanaan doontaa in ay ereygan dabar-goynta uu ahaado mid u kadsan dadka yahuuda ahaa ee lagu gumaadey dagaalkii labaad ee dunida .
- Dokumentiga bayaanka Stockholm derajo goooni ah ayuu leeyahey. Dowladda Iswiidhen dokumentigan wey saxiixdey meelmariseyna. Inta aysan dowladda waxba ka badelin markaas mooqifka Iswiidhen iyo kan heyadda Forum för levande historia sidiisa ayuu ahaanayaa, madaama aan nahney heyadda dowladda dalka hoostagta ayuu yeri, Eskil Frank oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Forum för levande Historia.
Isha: Radio Romano